Tantara: Ny Mpanjaka Tsara Farany teo Amin’ny Israely - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
I JOSIA dia valo taona monja rehefa tonga mpanjakan’ny foko roa atsimo amin’ny Israely. Kely loatra izany raha hoe ho mpanjaka. Koa nanampy azy hanapaka ny ﬁrenena ny olon-dehibe sasany teo am-piandohana.
Rehefa mpanjaka nandritra ny ﬁto taona i Josia dia nanomboka nitady an’i Jehovah. Nanaraka ny ohatra navelan’ireo mpanjaka tsara toa an’i Davida, Josafata ary Hezekia izy. Avy eo, raha mbola vao zatovo i Josia, dia nanao zavatra iray nilana herim-po.
Nandritra ny fotoana ela dia ratsy fanahy aoka izany ny ankamaroan’ny Israelita. Nanompo andriamani-tsy izy izy ireo. Niankohoka teo anoloan’ny sampy izy. Koa lasa i Josia sy ireo lehilahiny nanomboka nanaisotra ny ﬁvavahan-diso tsy ho eo amin’ny tany. Asa lehibe izany satria olona maro loatra no nanompo andriamani-tsy izy. Hitanao i Josia sy ireo lehilahiny eto manapotika ireo sampy.
Nentina tany amin’i Josia ilay boky, ary nasainy novakina taminy izany. Teo am-pihainoana, dia tsapan’i Josia fa tsy nitandrina ny lalàn’i Jehovah ny vahoaka. Nalahelo loatra izy ny amin’izany, ka nandrovitra ny ﬁtaﬁany, araka ny hitanao eto. Hoy izy: ‘Tezitra amintsika i Jehovah, satria tsy nitandrina ireo lalàna voasoratra ato amin’ity boky ity ny razambentsika.’
Firy taona i Josia tamin’izy lasa mpanjaka, ary nanomboka nanao inona izy rehefa avy nanjaka ﬁto taona?
Inona avy ireo dingana lehibe nataon’i Josia mba hampandrosoana ny ﬁvavahana marina, tamin’ny taona faha-8 sy faha-12 ary faha-18 nanjakany? (2 Tant. 34:3, 8)
Inona no lesona azontsika ianarana avy amin’ny ohatra nomen’i Josia Mpanjaka sy Hilkia Mpisoronabe, momba ny ﬁkojakojana ny toeram-pivavahantsika? (2 Tant. 34:9-13; Ohab. 11:14; 1 Kor. 10:31)